25 Common Windows 10 Izinkinga futhi kanjani ukuze uziqede | Caseguru
25 Common Windows 10 Izinkinga futhi kanjani ukuze uziqede Posted by : Jay Ali Jay Ali
August 3, 2015 Shiya amazwana
5 3 Flare
Windows 10 isiyatholakala kusukela ezinsukwini ezimbalwa manje bonke abasebenzisi abaningi kakade ukubika inkinga eziningi ukufakwa, sound, ukuvikeleka njll. Lokhu okuthunyelwe ngeke ukhulume Windows 10 nezinkinga nendlela uziqede.
#1 Windows 10 Izidingo System
Lokhu ngaphezulu isandulela, kodwa kubalulekile ukwazi uma ufuna ukuvimbela nezindaba okungadingekile phezu ukufakwa. Ikhompyutha yakho idinga ukuba kuze par nezindinganiso ezithile. Nanku specs Microsoft kudinga:
A processor of 1 gigahertz (GHz) noma ngokushesha
1 igigabhaythi (GB) (32-bit) noma 2 GB (64-bit) RAM
16 GB of free kanzima sediski
Microsoft IDirectX 9 ihluzo idivayisi WDDM driver
A akhawunti ye-Microsoft kanye ukufinyelela Internet
#2 Windows 10 Ngeke thwebula
Windows 10 Ngeke thwebula
Abasebenzisi Windows 7, 8 noma 8.1 kufanele bakwazi thwebula Windows 10 ngokuzenzakalelayo ngokuchofoza uphawu ngcono in the ugqoko ohlelweni on the yendawo yemisebenzi. Nokho, abanye abasebenzisi abe nobunzima kanye thwebula, noma ungakaze ogunyaziwe ukuba thwebula okwamanje (Microsoft sikhipha ngcono kancane kancane ngakho Internet akusho aphule).
Ezimweni iningi, inkinga ihlangabezane ngoba edition yakho yamanje ye-Windows olusha ngokuphelele, futhi egijima Windows Update uyayixazulula inkinga.
Ukuthi kufanele uhluleka, ungakwazi ukusebenza emhlabeni inkinga ngokusebenzisa Windows Microsoft 10 media thwebula ithuluzi. Kuyoba ukulanda ifayela .ISO uhlelo lokusebenza, ezingasetshenziswa ukulayishwa on a drive USB noma DVD ke ukufaka uhlelo lokusebenza kusuka ekuqaleni.
#3 Windows 10 Nezindaba Eqalisa
Windows 10 Nezindaba Eqalisa
Mhlawumbe inkinga eyisisekelo kunazo zonke ukuthi abasebenzisi ukubika ezinsukwini zakuqala of Windows 10 nzima in isebenze software uma ifakiwe. Kunzima ukucabanga impikiswano ebalulekile ngaphezu kwalokhu, futhi ngokwemvelo lokhu kuye kwaholela ekubeni abanye izimpendulo kunalokho testy on izinkundla Internet phezu usuku lokugcina noma kunjalo.
Nokho, kukhungathekise nakuba nezindaba kusebenze Ngokungangabazeki kukhona, esimweni Windows 10 kungenzeka ukuzixazulula kuqhathaniswa kobuhlungu. Ngempela, Microsoft uye washo obala ukuthi yiziphi izinkinga ezihlobene kusebenze kufanele eqinisweni ukuxazulula ngokwabo kwamaminithi ambalwa. Lokhu libikwe ngokuvamile kunjalo phakathi Windows 10 umphakathi, kodwa abanye abasebenzisi ubunzima obuhlala kunjalo abanolwazi. Kuyohlale kukhona okungahambi ngendlela nge ukukhululwa software ye Lesi silwane esiyinkimbinkimbi, nakuba, futhi ngokungangabazeki indlela ezinconywayo ngalabo ababhekene nalenkinga ukumane ufake bese uyazama futhi.
#4 Windows 10 Updates Automatic
Windows 10 Updates Automatic
Baningi abantu bazwakalisa ukukhathazeka mayelana nenqubomgomo entsha Microsoft update. Izibuyekezo Windows 10 inegunya, ukuze awukwazi ukuphuma ukulanda futhi ukufaka kubo. Lokho kufanele asho une software esitebeleni nezimagqabhagqabha security zakamuva kanye fixes, kodwa ngezinye izikhathi kuzobanda ukubangela izinkinga. Sike wawabona glitches ukushayeka okubangelwa ukungqubuzana phakathi Windows Update nomshayeli Nvidia yamuva, Kodwa inselele ngokushesha fixed. The bug yayixaka ukweqa ngokusebenzisa ukuhlolwa Microsoft akunakugwenywa.
Uma ubhekisa amabombo le Ikhasi Microsoft ukweseka uzothola iziyalezo for ukukhipha umshayeli engadingeki noma update. Uzothola i "Bonisa noma fihla izibuyekezo" nkinga iphakheji. Download it, vuleka it phezulu, kampompi Fihla updates, bese uhlole updates ungafuni ukufaka ngokuzenzakalelayo. Ungakwazi njalo ukubuyela kulo kamuva bese uyathinta Bonisa izibuyekezo ezifihliwe bese ungahloli lutho usuthathe isinqumo ungathandi ufuna ukufaka ngemuva yonke.
Ungase usebenzise firewall ukuvimba i-update service futhi uvimbele it kusuka ekubuyekezeni ngokuzenzakalelayo. Inkinga enkulu ngalokhu ukuthi Microsoft has a inqubomgomo wayinquma ukufinyelela updates esizayo ngaphandle kwalapho uthatha izibuyekezo eziza ingakapheli inyanga eyodwa. Ukufinyelela bayobuyiselwa uma kamuva ukwamukela izibuyekezo luvimbe, ngakho kungase namanje kube indlela ukuthenga isikhathi esithile ukuthola ukuthi esitebeleni the update.
#5 Windows 10 Izinkinga umsindo
Windows 10 Izinkinga umsindo
Uma unezinkinga ukufakwa umshayeli Realtek, musa uthole isipiliyoni audio ngokugcwele VIA HD Audio, noma ube nezindaba nge Conexant audio, kukhona workaround ngawe ukuzama.
Ake sibheke lezi zimpikiswano ezintathu ukuze reverse. Inkinga nge Conexant audio kusho ukuthi ungase uzwe izwi in Windows 10 nakuba konke selivela lisebenza ngendlela efanele. Nakuba lokhu Kuphenywa, Microsoft isikisela egijima msconfig.exe futhi elibangise ithebhu Boot. Chofoza Advanced inkinobho kukho, Ukuhlola isiqophi ibhokisi Maximum bese usetha zenani 3072.
Uma une VIA HD umsindo uthole ukuthi ungakwazi kuphela ukuzwa umsindo ovela zokusebenza ezithile, kukhona okwehlukile workaround kwakho. Vula Playback Amadivayisi, qhebeza i idivayisi yomsindo futhi uwubeke njengesizathu idivayisi ezenzakalelayo. Nalokhu wenziwe, ukukhetha idivayisi, hit Properties, bathuthele ithebhu Enhancements futhi uhlole Khubaza yonke option izithuthukisi.
Ekugcineni, uma sihlushwa nge eziyinkinga Realtek ukufakwa umshayeli audio — ikakhulukazi a Iphutha 0x000005b4 — ungazama workaround kushicilelwa Stone Support Library. Kukhona umkhombandlela usebenzisa Group Policy Umhleli ukunikeza umshayeli eside ukufaka, noma ungalanda ifayela ebhukwini ukubeka izilungiselelo entsha endaweni nombhangqwana ukuchofoza. Uma lokhu sekwenziwe, ungakwazi ke kabusha uzame ukufakwa umshayeli.
#6 Windows 10 updates ngenkani imbangela crash system
Enye inkinga okubangelwa izibuyekezo ngenkani wukuthi bangakwazi ashayeka ikhompyutha yakho.
Iqalisa ikhompyutha yakho kufanele silungise ukuthi icala by icala isisekelo. You Ungase futhi ukhiphe umshayeli lokho okubangela izinkinga.
#7 Windows 10 Nezindaba Chrome
Windows 10 Nezindaba Chrome
Abasebenzisi abaningi nazo ukubika izinkinga esemncane Chrome isiphequluli. Nakuba Microsoft uye wazama repackage siqu imizamo yayo ukuphequlula Internet lapho kukhululwa isiphequluli Edge, lokhu namanje zindaba Ngokungangabazeki ezimbi corporation. Chrome iye yazuza eziningi ukuthandwa nge hardcore abasebenzisi Internet, futhi lawa ngokunembile uhlobo labantu abakhuluphele ngokwemvelo cishe babe waba Abokuqala ekuseni ohlelweni lokusebenza Windows.
Ngeshwa, Abasebenzisi abaningi Chrome isiphequluli ababhekene lonke isihlenga yezinkinga, nge bogging kanye slowdowns of the software kubhekwe ikakhulukazi esandile. Kubonakala sengathi for abanye downloaders of the isiphequluli Chrome, imisebenzi processor-olunzulu ezifana ukusakaza isiqophi nje hhayi ezisebenza, njengoba kufanele.
Lokhu ngokuqinisekile kuyoba njalo udaba Microsoft usebenza phezu kwesikhathi, kodwa workaround masinya nezindaba Chrome sabhekana iwukuba ukubulala bonke izandiso ezihlobene isiphequluli. Njengazo zonke izinkinga ezihlobene Windows 10, ngokusikisela ukukhipha futhi ufaka Chrome futhi uye waba ovelele, futhi inqubo elula ezingasiza uqede ubunzima.
#8 Windows 10 updates ngenkani abangele izibhelu software
Windows 10 updates ngenkani abangele izibhelu software
The updates ngenkani kukhona kude isici trickiest of Windows 10. Nokho enye inkinga ukuthi kungenza kwenzeke uma update Windows kuvumelana wesithathu umshayeli ukuphathwa software update. Lokhu kungabangela kuphahlazeka. Isofthiwe wesithathu kungaba kuqedwe, kodwa update Windows bengayi.
Ukubheja omkhulu khipha third ukuphathwa umshayeli party futhi sivumele Windows anakekele zonke izibuyekezo uhlelo, onikeza Microsoft amandla phezu imikhiqizo enye yenkampani.
#9 Windows 10 Bahambe izintandokazi
Windows 10 Bahambe izintandokazi
Internet Explorer bekugcwele izingcezu wathukwa iningi software emhlabeni, futhi Microsoft kwaba pretty okuningi uphoqekile zokuyibuyekeza ngokushesha kunokuba kamuva. Akumangazi-ke ukuthi ukhiphe entsha Edge isiphequluli, kanye impendulo ekuseni salolu hlelo kungenxa ukuthi ngcono kakhulu phezu Internet Explorer yayo eyandulele.
Nokho, abanye abasebenzisi nazo izinkinga indawo uhlu lwabo izintandokazi, iziphi kufanele bafudukela phezu ngokuqondile ekhona Internet Explorer amabhukumaka. Nokho, Ezimweni eziningi lokhu kumane kuyindaba ethinta ukuhlonza. Ukuze bathole izintandokazi on Edge, limane nje kuyadingeka ukuvula imenyu bese uchofoze 'Izilungiselelo'. Skrolela phansi 'Ngenisa Izintandokazi’ kusuka kwenye isiphequluli, khetha isiphequluli yasetshenziswa phambilini, futhi ekugcineni uchofoze 'Import'. Lokhu kufanele ukuxazulula inkinga kweso.
#10 Windows 10 Cortana ayisebenzi
Windows 10 Cortana ayisebenzi
Ezinye Windows 10 abasebenzisi Kuye unenkinga ekutholeni Cortana ukusebenza. Abanye abantu bathola imilayezo Cortana ayitholakali esifundeni yabo noma ulimi, naphezu kokuba esifundeni osekelwa futhi usebenzisa ulimi osekelwa. Abanye baye bathola Cortana hhayi ngokuzenzakalelayo, noma ayisebenzi kahle.
Okokuqala nje, hit Qala > Cortana > Notebook futhi ungakwazi uguqule Cortana futhi off.
Ake ubheke Izilungiselelo > Isikhathi & ulimi. Udinga uqinisekise ukuthi usebenzisa lezi zilimi - Chinese (Simplified), English (U.K.), English (U.S.), French, Italian, German, neSpanishi, nokuthi Speech ngolimi lwakho pack efakwe. Udinga izwe noma isifunda sakho ukuba China, France, Germany, Italy, Spain, I-United Kingdom, noma United States.
#11 Windows 10 OneDrive izibambindawo gone
Windows 10 OneDrive izibambindawo gone
Microsoft uye washintsha indlela ukuthi inkonzo isipele ifu, OneDrive, usebenza Windows 10. A lot zabantu acasuke ukuthola ukuthi izibambindawo, eyayibonakala ngokuyisisekelo kusengaphambili amafayela ngamunye egcinwe efwini, sebesusiwe. Ifuna, lokhu kwenziwa ngoba abanye abantu ayedidekile by izibambindawo futhi ababekucabanga amafayela agcinwe endaweni yakini. Uhlelo manje lusekelwe ukuvumelanisa abakhethayo, okuyinto engazange kuyamjabulisa abanye abantu abathanda ukwazi ukuvumelanisa amafayela ngabanye, lapho besebenza ikakhulukazi kumadivayisi limited isikhala sokugcina.
Ukudabula isiphequluli sewebhu futhi uthole amafayela ngamunye ofuna.
Ungase ibalazwe njengelungelo drive in wamazwe ifayela. Ngena ku OneDrive esipheqululini sakho bese uchofoze Amafayela ke ukukopisha inombolo cid (ngakho nakanjani uzokuzwa athi cid = igama lilandelwa inombolo in the bar ikheli). Ngenxa yalesi sibonelo ake sithi lithi cid = 435rty. Vula Ifayela Explorer, Iya ku Lokhu PC, bese uchofoza Map idrayivu yenethiwekhi, khetha incwadi bese unamathisela in "https://d.docs.live.net/435rty". Lapho 435rty njengenombolo yakho cid. Ukuxhuma at isibonakaliso-in kufanele ihlolwe. Kuzodingeka ungene ngemvume, kodwa ke uzokwazi ukufinyelela OneDrive yakho ngokusebenzisa File Explorer, kodwa waxwayisa - kungcono kancane slow.
Inothi : Lokhu namanje umsebenzi oqhubekayo, ngakho uma kubalulekile kuwe, tshela iqembu OneDrive ngakho. Ungenza iziphakamiso at the Website OneDrive. Elethe izibambindawo noma ezinye ehlukile emuva update esizayo.
#12 Windows 10 Ifolda uhluleka
windows 10 ifolda uhluleka
Ezinye Windows ekuseni 10 abasebenzisi baye basikisela ukuthi Windows 8 luphakeme entsha uhlelo lokusebenza kwelinye mayelana. Isicelo imeyili okuye kufakwe Windows 10 asivumi okwamanje abasebenzisi ukwakha amafolda amancane lapho uhlela imeyili ekhona. Nakuba kungenzeka lokhu kubhekwe okuthile a udaba ewubala by abasebenzisi abaningi, okwamanje awukho isixazululo lesi sikhalazo.
#13 Windows 10 Udaba Mail
Abaningi abakwengezile kuqala Windows 10 bathi Windows Mail etholakala version 8.1 kwakuphakeme. Lokhu kungenxa yokuthi ungase udale amafolda amafolda amancane, lapho ungeke ukwenze nge lokusebenza Mail in Windows 10 (okungenani njengamanje). Abantu abafuna ukwenza okuningi imeyili kwamukeleke usebenzisa Thunderbird esikhundleni, elisebenza kahle Windows 10.
#14 Windows 10 ngokweqile bandwidth ukusetshenziswa udaba
Windows 10 ngokweqile bandwidth ukusetshenziswa udaba
In Windows 10 Update Delivery Optimisation sici ukuthi inikwe amandla ngokwakhona. Inkinga wukuthi lo ukusebenza isebenzisa ngokuzenzakalelayo computer aphethe futhi komkhawulokudonsa internet ngaphakathi ukuze adlulisele izibuyekezo ezinye Windows 10 Abasebenzisi PC
Windows 10 abasebenzisi bangakhetha ngesandla ukuvula-off the isici, Ngaleyo ndlela esaziwa womkhawulokudonsa sibalulekile imisebenzi ebalulekile. Ukuyekisa Windows Update Delivery Optimisation, landela izinyathelo ezingezansi:
Step 1: Vula izilungiselelo
Step 2: Zula the Windows Update isigaba
Step 3: Khetha Advanced
Step 4: Khetha Khetha indlela updates ezinikezelwa Ukukhetha
Step 5: Beka guqula Valiwe
Ngemuva kokufaka Windows 10, abasebenzisi umqaphele ukuthi Thola izibuyekezo ezivela Microsoft, futhi uthole izibuyekezo ezivela bese uthumela izibuyekezo isethwe ngokuzenzakalela PC kunethiwekhi yami yendawo, kanye nama-PC on the internet.
Microsoft ishilo ukuthi isici Windows Update Delivery Customisation ngeke ngempela phansi sinciphise-a PC umninikhaya sika internet connection, kodwa sizosebenzisa bandwidth kuphela limited.
#15 Windows 10 Ukuxhumana nezindaba
Windows 10 Ukuxhumana nezindaba
Ezinye Windows 10 abasebenzisi futhi ukhononde ngokuthi Wi-Fi usika out on a njalo. Lokhu akusiyo into engajwayelekile nanoma iyiphi uhlelo lokusebenza noma umshini, kodwa esimweni the Windows 10 kuye kwaba nezinkinga reconnection. Lokhu empeleni akulona udaba ikakhulukazi Ayeye yonkana izinguqulo eziningi Windows, nokulungisa nje kudinga kabusha elula. Lokhu kwaba ngaphambilini an issue with Windows 7 futhi Windows 8, futhi kuyinto okufanele ixazululwe e fashion angabacwasi eqondile.
Futhi liye Abanye basikisela Abokuqala okuqala Windows 10 ukuthi ivimbele Wi-Fi ukwabelana kwenza lwenethiwekhi wireless ukuba kakhulu esitebeleni. Lokhu workaround ayikakaqinisekiswa ngokusemthethweni Microsoft, kodwa uma Wi-Fi libonakala nenkinga ke ivimbele ngokuhlanganyela Windows 10 kungaba fix short-term.
#16 Windows 10 Wi-Fi ingazinzi, slow, noma ngeke ukuxhuma
Windows 10 Wi-Fi ingazinzi, slow, noma ngeke ukuxhuma
A lot of Windows 10 abasebenzisi ukubika izinkinga Wi-Fi. Kwabanye abantu kungcono slow noma ngezikhathi ezithile amaconsi uxhumano, abanye unenkinga ekutholeni Wi-Fi ukusebenza ngaso sonke.
Qala ngokuphendula router yakho nekhompyutha yakho amatoho aphinde.
Uma ungeke uthole Wi-Fi ukusebenza ngaso sonke ke ungase ube nenkinga driver. Hlola nge inethiwekhi yakho adaptha umakhi futhi uqiniseke ukuthi unayo umshayeli yakamuva. Ungase ube ukulanda kwenye ikhompyutha bese ulufaka nge-USB flash drive.
Qiniseka ukuthi kumzila wakho unalo firmware zakamuva. Uzothola it at website yomenzi.
Iya ku Izilungiselelo > Network & Internet > Wi-Fi. Qinisekisa ukuthi Xhuma ngokuzenzakalelayo ibhokisi iyenziwa for inethiwekhi ofuna ukuxhuma.
Iya ku Izilungiselelo > Network & Internet > Wi-Fi > Phatha izilungiselelo Wi-Fi > Phatha amanethiwekhi eyaziwa futhi ukhethe inethiwekhi yakho, bese uchofoza Khohlwa. Iqalise umshini bese ufaka imininingwane inethiwekhi ukuxhuma fresh.
#17 Windows 10 ohlanganyela yakho Wi-Fi nabo
Windows 10 ohlanganyela yakho Wi-Fi nabo
Kukhona njalo ukulinganisela ukuze sitholakale phakathi lula nokuphepha, kodwa abanye abantu bazizwa Microsoft weqe kwemingcele elisha Wi-Fi Sense sici. Umqondo oyisisekelo ukuthi unikeza indlela elula futhi okuzenzakalelayo ukwabelana iphasiwedi yakho ye-Wi-Fi (zombhalo ngokugcwele) nabo ukusivumela evela Outlook, Skype, noma Facebook. Inkinga wukuthi ungasaba ukuze unikeze ukufinyelela kwenethiwekhi yakho Wi-Fi ukuba yilowo nalowo Facebook "abangane" wakho.
Iya ku Izilungiselelo > Network & Internet > Wi-Fi > Phatha izilungiselelo Wi-Fi futhi ungakwazi isikrini inethiwekhi ukwabelana off, noma ukhethe ukufaka Outlook, Skype, noma Facebook.
Ungase futhi anqume ukuthi ukuxhuma kumanethiwekhi ekhungethe oxhumana lapha, okuyinto ebaluleke, ngoba, njengoba Microsoft kusho, "Khumbula, akuwona wonke amanethiwekhi Wi-Fi avikelekile. "
Uma ukukhathazeka kwakho imayelana inethiwekhi yenkampani, noma omunye kunethiwekhi yakho hhayi ukuphuma, ke ungakwazi futhi ukwengeza umbhalo "_optout" igama lakho inethiwekhi (SSID), kodwa Microsoft uthi kungathatha izinsuku ezimbalwa inethiwekhi yakho ukuba kwanezela ohlwini abakhethe out for Wi-Fi Sense.
#18 Windows 10 Bluetooth ayisebenzi
Windows 10 Bluetooth ayisebenzi
Nabaningana Windows 10 abasebenzisi unenkinga ekutholeni Bluetooth ukusebenza kahle. Lokhu kungaba nomthelela ikhibhodi yakho, mouse, headphones, nanoma yini enye uxhuma ekhompyutheni yakho nge-Bluetooth.
Iya ku Izilungiselelo > Yedivayisi futhi uqiniseke ukuthi Bluetooth is yavulwa on.
Qinisekisa ukuthi isesekeli Bluetooth yakho ishajeke ngokugcwele nokuthi usuke kulandela inqubo ukubhanqa. Ngezinye izikhathi kufanele ubambe inkinobho ukwenza idivaysi itholakale. Hlola nomenzi for imininingwane.
Kukhona ithuba enengqondo ukuthi lokhu kuyinkinga umshayeli. Ungafuna ukuhlola nomenzi ukuthi une umshayeli yakamuva, ikakhulukazi uma egxuma iqonde kusukela Windows 7 ukuze 10.
A abantu abambalwa baye libike ukuthi ukukhipha umshayeli idivayisi ubhekene kokuba nenkinga, Iqalisa umshini wakho, bese Ngokuvumela Microsoft ngokuzenzakalelayo bona it futhi ufake umshayeli uyokwenza trick.
#19 Windows 10 Printer Ayiphenduli
Windows 10 Printer Ayiphenduli
Uma, emva ngcono, uthola ukuthi iphrinta yakho ayisebenzi, kungase kudingeke ukuqala lonke ukufakwa inqubo phezu.
Ukuze kuqinisekiswe lwenethiwekhi nekhono, konke, ngisho nabashayeli hardware elihambisana nalesahluko, kufanele olusha kusengaphambili of ngcono. Qinisekisa ukuthi usebenzisa iphrinta lokho iyahambisana Windows 10.
#20 Windows 10 ayikwazi ukuvula se-Windows noma abakwazi thwebula zokusebenza
Windows 10 ayikwazi ukuvula se-Windows noma abakwazi thwebula zokusebenza
Kubonakala sengathi eziningi abantu agijimela nezinkinga Windows ngemva kokubuyekeza Windows 10. Kwabanye abantu ngeke ukuvula ngaso sonke, ngoba abanye ukuthi nihlola engenakwenzeka ngempela thwebula zokusebenza noma izibuyekezo lokusebenza. Kukhona ithuba ukuthi ilibele lokusebenza okulandwayo updates a yi amaseva esimatasa, kodwa kukhona ezinye izinto ungazama:
Cindezela Windows + R bese uthayipha exe ebhokisini bese ucindezela Faka. Uma lokho kungasebenzi ke ukususa thwebula yakho emgqeni bese uzame futhi. Abanye abantu ukubika ukuthi kwakungisiza nabo ngemva imizamo embalwa.
Uma ungakwazi ukufinyelela Isitolo se-Windows ngaso sonke kungase kube ngenxa yokuthi une okungalungile esifundeni isethi. Iya ku Izilungiselelo > Isikhathi & ulimi futhi uqiniseke ukuthi uwubeke izwe uku empeleni.
Kuba njalo kuwufanele siqiniseke ukuthi akuyona phansi izilungiselelo isikhathi engalungile. Ake ubheke Izilungiselelo > Isikhathi & ulimi futhi uqinisekise konke kubukeka right.
#21 Windows 10 Edge ngeke Ukuthutha umculo ngesikhathi incishisiwe
Windows 10 Edge ngeke Ukuthutha umculo ngesikhathi incishisiwe
Ngoba Edge lokusebenza jikelele, izenzo zayo imisiwe lapho ukuthi incishisiwe. Lokhu ecasulayo ngempela uma ubhekene ukusakaza umculo kuso.
Akukho fix for this, kanjalo umane kufanele usakaze umculo wakho kusuka komunye umthombo uma uhlela ukulalela ngenkathi usebenzisa kudivayisi yakho ukuze eminye imisebenzi.
#22 Windows 10 Isikrini olukhohlisayo
Windows 10 Isikrini olukhohlisayo
Abanye abasebenzisi kokubheka Windows 10 kumadivayisi eselula zabo zithi amakhono isikrini akuzona njengoba intuitively functional njengoba kufanele. Ngokwesibonelo, kulula miss onqenqemeni ifasitela lapho bezama idonsele, futhi ezinye zezimpawu zincane kakhulu ukuba siqonde ngomunwe wakho pad.
Ngeshwa, lokhu nje uhlobo sesilo. Kukhona yini-ke okuningi ngaphandle eyokwenza uzokusiza unqobe le nkinga finicky ngempela.
#23 Windows 10 Ecasulayo pop-ups
Windows 10 Ecasulayo pop-ups
Ekugcineni, abasebenzisi imithombo yezokuxhumana babike ukuthi lapho ezama ukufaka Windows 10 ukuthi basuke kokuhlangana umyalezo kuyacasula ikakhulukazi. Lokhu iwindi pop-up unikeza ezinye izeluleko okungenani esiwusizo ukuthi noma iyiphi inkampani software owake wanikela yimuphi abasebenzisi bayo. The window in umbuzo umane athi "Kwenzeka", bese elaborates kulo mqondo ngokumtshela ukuthi “Something Okwenzekile – Microsoft – Sekwenzeka okuthile. "
Njengoba ungacabanga lokhu uhlangene lokujabula kakhulu futhi meme-indalo on media social, kodwa naphezu ukuphikisana amusement ukuthi abantu abaningi baye elisuselwa leli phutha, umkhuba akusiyo ngempela inkinga okukhulu. Circumnavigating lolu daba kumane icala ukukhipha futhi ufaka isofthiwe, futhi iningi labantu amacala ayikho ukuphindaphinda lomyalezo Kuyavunywa ecasulayo.
#24 Windows 10 updates ngenkani ukudala Yamakhasimende junkware
Windows 10 updates ngenkani ukudala Yamakhasimende junkware
Windows 10 alisiniketi abasebenzisi ukuzikhethela uma kuziwa updates uhlelo. Ngokuzenzakalelayo It uyabamukela. Ngakolunye uhlangothi lokhu kusiza computer iya mayelana nebhizinisi layo yokubuyekeza ngokufanele. Iphinde kuqinisekisa ukuthi computer usesikhathini ezokuphepha nezimagqabhagqabha, kodwa ukubuyekeza okuzenzakalelayo kwenza Microsoft ukuphoqa-ondle cishe noma yini afuna kuma PC lomsebenzisi noma idivayisi yeselula.
Ayikho fix ngempela lo, ngaphandle uma ugibela Windows 10 Enterprise, Isixazululo ibhizinisi Microsoft ukuthi lets abasebenzisi ukuvumela noma ukunqabela updates.
#25 Windows 10 akukhulule noma
Windows 10 akukhulule noma
Lokhu akuyona kangaka inkinga njengoba kuyisixwayiso mnene. Windows 10 azotholakala njengendlela ukuthuthukisa free kodwa kuphela unyaka owodwa. Ngemva kwalokho retails for $119.
Ngonyaka kunjani isikhathi eside, kodwa emhlabeni of technology kungcono kweso, ukuze ungabeki lokhu kuthuthukiswe off for eside kakhulu … nje isikhathi eside ngokwanele ukuvumela Kinks sokuqala athole ironed out.
windows Windows 10 Thumela PreviousSamsung sika Next Galaxy smartphone uzobe umemezele August 13thThumela Landelayo Caseguru Products Thanda, Izoba khona phezu Amazon.com! Posts Related
15 Izinkinga ngosiko Samsung Galaxy S6 / S6 – Indlela Lungisa Them
Galaxy S6 onqenqemeni Iron Man Limited Edition – Ukukhishwa ebhokisini Official
iPhone 6 Screen Ukubuyiselwa kwenziwe e 5 amaminithi
Samsung Galaxy S3 Glass Screen Ukubuyiselwa Ukulungisa Change
Igama	Ikheli Le-Imeyili
Copyright 2015 Caseguru Inc | Wonke Amalungelo Agodliwe
Pin It Ungahlukıselana